Xiaomi 11T hadda waxaa laga heli karaa dalab bilow ah Aliexpress | Androidsis
Ka dib markii ay aad u jeclayd, Xiaomi waxay soo saartay moobiilkeeda cusub, the Xiaomi 11T, Aliexpress. Oo isagu uma samayn si caadi ah, laakiin wuxuu la socdaa daahfurkaan dalabyo gaar ah oo ay tahay inaad ka faa'iidaysato.
Ma xiisaynaysaa Waxaad hadda ka iibsan kartaa Xiaomi 11T dalab bilow ah Aliexpress, haciendo halkan guji.
1 Tilmaamaha Xiaomi 11T
1.1 108 MP kamarad xirfadeed
1.2 120Hz AMOLED AdaptiveSync bandhig
1.3 Calanka MediaTek Cabbirka 1200-Ultra Processor
1.4 Bateriga 100% ayaa lagu dallacay 36 daqiiqo oo kaliya
2 Sida loo helo qiimo -dhimis 25 ah oo ku saabsan Xiaomi 11T
Tilmaamaha Xiaomi 11T
Qalabkan cusub waxaa la socda astaamo u gaar ah oo aan ku soo koobi karno kuwan soo socda:
108 MP kamarad xirfadeed
Haddii qaabka kamaraddu kaa yaraato, moobiilkan ayaad yeelan doontaa wadar ah 5 saamayn video, oo u eg saamaynta ay sababaan filimada, oo aad ku noqon karto hal -abuurnimo sidaad rabto shaqooyinkaaga maqalka ah.
Dhinaca kale, Muraayadda Telemacro ayaa kaa caawin doonta inaad adduunka ku aragto wax yar. Heerka tafaasiilku wuxuu kaa tagi doonaa hadal la'aan, mana aha wax ka yar, maadaama kamaradda guur -guura ay si dhif ah u maamusho inay soo qabato walxo yar yar oo ka samaysan masaafo microscopic ah.
Tan waxaan ku daraynaa 120º muraayad xagal aad u ballaaran. Waad ku mahadsan tahay iyaga, maahan inaad ka walwasho inaad taleefankaaga dib u soo celiso si aad wax walba u qabato: waxaad ku duubi kartaa ficil ahaan wax kasta oo hortaada ah, iyada oo aan lahayn xaddidnaan. Xataa xaaladaha iftiinka hooseeya!
120Hz AMOLED AdaptiveSync bandhig
Haddii waxa aad jeceshahay aad ka guureyso hal app una gudubto mid kale oo aad u isticmaasho waxyaabaha ku jira hab dareere ah, waxaad jeclaan doontaa astaantan, oo cabirkeeda cabbitaanku waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya suuqa: 120 Hz.
Waxaad dareemi doontaa dheecaanka farahaaga. Waxaad u rogi doontaa si aan caadi ahayn oo siman.
Calanka MediaTek Cabbirka 1200-Ultra Processor
Ma aha oo kaliya in ay leedahay weyn Processor 6nm oo leh laba 5G, ilaa 3,0GHz, Waxay sidoo kale taageertaa tikniyoolajiyadda 5G. Modem-kan la dhisay wuxuu hubinayaa in aaladda si otomaatig ah isu hagaajinayso si ay u isticmaasho awood yar.
Bateriga 100% ayaa lagu dallacay 36 daqiiqo oo kaliya
Dhanka batteriga, waxaan leenahay awood 500 mAh, oo lagu daray lacag turbo ah oo ah 67 W.
Xogtan la yaabka leh ayaa nooga tagaysa xog si gaar ah u wanaagsan, waana taas Waxaan awoodi doonnaa inaan ku dallacno batteriga gacanta 100% 36 daqiiqo gudahood. Tan waxaa suurtogal ah iyada oo ay ugu wacan tahay maaddada anode oxide oksaydhka, oo awood u leh in ay kaydiso toban laab ion lithium ka badan garaafyada caadiga ah.
Iyo sida haddii aysan taasi ku filnayn, shaashadda 6,67 will kaama tegi doonto danayn la'aan. Batari weyn, oo loogu talagalay moobiil weyn oo cajiib ah. Sidan ayaan ugu raaxeysan karnaa taxanaha iyo filimada aan aadka u jecelnahay, annagoo aan shaashad yar ku dul -boodin oo aan ka cabsanayn inay ka dhammaato batteriga inta aan ku jirno safar aan gacanta ku qaadin xeedho.
Sida loo helo qiimo -dhimis 25 ah oo ku saabsan Xiaomi 11T
Sidii aan hore u sheegnay, aaladdan ayaa hadda laga heli karaa adduunka oo dhan Aliexpress. Intaa waxaa dheer, munaasabadda furitaankeeda, waxaad soo furan kartaa a Kuuboon qiimo dhimis ah taasi wax badan nagama yarayn doonto waxna ma yarayn, taasi € 25 wadarta guud.
Taas macnaheedu waa in noocyada aaladaha ay ku sii jiraan qiimayaasha soo socda:
Kuubanka la adeegsanaayo waa 09ESOW25 oo si wax ku ool ah ayaad u soo furan kartaa muddada dhiirrigelinta haciendo halkan guji.
Adiguna, keebaad iibsanaysaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Xiaomi 11T hadda waxaa laga heli karaa dalab bilow ah Aliexpress
Eebaha siddooyinkii: Dagaalku ha bilaabmo, hadda waxaa laga heli karaa Dukaanka Play